Fikradaha xisaabta ee lagu qiimeeyo Fasalka Shanaad waxaa ka mid ah:
Tirada iyo Hawlgallada
Qaybi lambarro dhowr god leh. Xalliyaan dhibaatooyinka dhabta ah iyo xisaabta ee u baahan isku darka, kala-goynta, isku dhufashada iyo u qaybinta tirooyin dhan oo kala duwan. Tusaale ahaan: Xisaabinta 117 ÷ 9 = 13 waxaa lagu hubin karaa isku dhufasho 9 iyo 13. Dalbo jajabyo iyo jajab tobanle ah, oo ay ku jiraan lambarro isku dhafan iyo jajabyo aan habbooneyn, oo waxaad ku heli kartaa xariiq lambar. Akhriso oo qor jajab tobanle adoo adeegsanaya qiimaha meesha si aad u sharaxdo jajab tobanle marka loo eego kooxaha min milyaneer illaa milyan.
Matala xaaladaha dunida dhabta ah adoo adeegsanaya isla'egyo iyo sinnaan la'aan ku lug leh doorsoomayaal. Abuur xaalado dhab ah oo u dhigma isla'egyada iyo sinnaan la'aanta. Tusaale ahaan: 250 - 27 × a = b ayaa loo isticmaali karaa in lagu metelo tirada xaashiyaha waraaqaha ah ee ka haray baakadka 250 go 'markii arday kasta oo ku jira fasalka 27 la siiyo tiro go'an oo xaashi ah.
Joometri iyo Cabbiraad
Qeex oo kala saar sawirada saddex-geesoodka ah oo ay ku jiraan xabadaha, jajabyada iyo Ahraamta tirada geesaha, wejiyada ama geesaha iyo sidoo kale noocyada wejiyada. Go'aaminta aagga saddexagalka iyo afargeesoodka; go'aamiso bedka dusha sare iyo mugga qaababka qaabdhismeedka qaabdhismeedka qaabab kala duwan leh
Ogow oo adeegso qeexitaanka celceliska, dhexdhexaadka iyo baaxadda xogta. Baro sida loo isticmaalo xaashida macluumaadka si aad u hesho celceliska, dhexdhexaadka iyo baaxadda xogta la dejiyey. Abuur oo falanqee garaafyada laba-geesoodka ah iyo garaafyada xariiqda adigoo adeegsanaya fahamka tirooyinka oo dhan, jajabyada iyo jajab tobanle. Baro sida loo abuuro miisaska waraaqaha iyo jaantusyada si loo muujiyo xogta.